"Dawladda iyo dadka xilalka u haya ummaddu xaq baa u leedahay inay Toosiyaan...Dadka Caadaystay inay facebooka shakhsi Weeraran Cadaab uun bay ku Danbeyn". Siyaasi Jamaal Cali Xuseen.
Wednesday November 24, 2021 - 01:41:16 in Wararka by Super Admin
Hargeysa(Xogreeb.com)-"Nin Baa nabiga u yimi, nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ha ahaatee Oo ku yidhi " Nabi Alloow sidee baan jannadda ku geli karaa" markaasu nabigu ku yidhi " Carabkaaga ka adkoow." Dadka caadaystay inay facebooka dadka ka caayaan shakhsi Weerar cadaab uun bay ku danbeyn. Dawladda iyo dadka xilalka u haya ummaddu xaq baa u leedahay inay toosiyaan ama ku mucaaridaan markaad aragtaan iyagoo xilkii ka soo bixi waayey ama ummadda marin habaabinaya oo been qaawan wax qabad uga dhigaya. In lala xisaabtamo aad baan u taageersanahay. Mucaaridada hufan ee shaqo la qaban waayey iyo tilmaamista karti daro jirta si wax loo saxo, iyo weliba musuqmaasuq iyo eex toosh lagu ifiyey maaha cay ee waa wax sixid hadaanad qofka shakhsi caayeynin. Laakiin yaan lays shakhsi caayin Oo masuulka shaqadii sa iyo karti daradiisa ha lagu canaanto. Mida kale iyaduna inta kolba xilka ummadda u haysa qudhoodu isku heli maayaan kursigaanu ku fadhiyayna cidina juuq odhanmayso. Laakiin ka yeeli mayno. Ilaahay wuxuu yidhi Qofka muslinka ahi waa ka ay afkiisa iyo adinkiisa ay dadku ka Nabad galaan. Ilaahay kheyrka haynagu toosiyo.